प्रधानमन्त्री ओलीको भष्मासुर प्रवृतिको अन्त्य गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्छौः माधव नेपाल - National Live TV
भूमिगत विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न टोली गठन, प्रतिवन्ध हटाउने र हतियार बिसाउन लगाईने
कसले दियो मन्त्री प्रेम आलेलाई १ अर्ब रुपैयाको प्रलोभन ?
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन सखाप पारियो: प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन प्रचण्डमाधव लाई ओलीको ठाडै चुनौति
के सर्वोच्चले रोक्यो प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन ? यसो भन्छन मन्त्री पार्वत गुरुङ
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता :शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ
महिला अधिकारकर्मीहरुद्वारा कानुन कार्यान्वयन मापनको अनुगमन गर्न सुझाव
काठमाण्डौ, 22 जनवरी 2021
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भष्मासुर प्रवृतिको अन्त्य गरी प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरिने बताउनुभएको छ । शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्दमा आयोजना गरेको विरोध सभामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको भष्मासुर प्रवृतिको अन्त्य गर्दै प्रतिनिधि सभाको पुर्नगठन गरिने बताउनुभएको हो । उहाँले पार्टीले केपी ओली बनाएको भएपनि ओली भष्मासुर बनेको भन्दै भष्मासुरलाई पार्टीले सिध्याउने बताउनुभयो । भष्मासुर प्रवृतिको अन्त्यपछि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी र देशको स्थायित्वमाथि खड्ग प्रहार गरेको बताउनुभयो । अध्यक्ष नेपालले अरु राजनीतिक दलहरुले फेरी केपी ओलीसँग मिल्ने हुन कि भन्ने आशंका गरेको भन्दै केपी ओलीसँग झुक्ने कुनै काम नगर्ने बताउनुभयो । ओलीसँग मिल्छन् भन्ने भ्रम नपाल्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । आफुहरुले मुल्य र विचारको राजनीति गरेपनि ओली कम्युनिष्ट आदर्शमा सर्मपित नभएको र सिद्दान्तनिष्ठ नभएको उहाँको भनाई छ ।
अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली हिटलरको बाटो हिडेको टिप्पणी गर्नुभयो । ओली निर्वाचित व्यक्ति भएपनि संवैधानिक कु गरेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाली जनता ओलीको हिटलर प्रवृत्तिसँग नडराउने उहाँको भनाई छ । संविधानले राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितता, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त राखेपनि ओलीले आफुमा मात्रै शक्ति केन्द्रीत गरेको उहाँले बताउनुभयो । एकाधिकारवादको विरोधमा आफुहरु रहेको उहाँको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टी र संसदको बहुमत हिस्सा नरहेपछि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने भएपनि नरसंहार गरेको अध्यक्ष नेपालको भनाई छ । पार्टीको सम्पूर्ण तह र तप्कामा आफुहरुको अत्याधिक बहुमत भएको र ओलीसँग सानो अरिंगालको झुण्ड र साइबर सेना मात्रै भएको उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष नेपालले सुर्य चिन्ह निर्वाचन आयोगबाट ल्याउने मान्छे आफु जिउँदै भएकोले सुर्य चिन्ह आफुहरुले नै पाउने दाबी गर्नुभयो ।